ukuchonga | Ibhalisiwe IChariot
Nceda ukhangele Ukukhangela indawo	客户 logo
Ikholamu yokuhlamba iseti
Ikhitshi kunye neGumbi lokuhlambela elenzelwe izixhobo zokuhambisa amanzi
Inkqubo yeeshawari yeArcora ye-thermostatic yeshawari yemvula
Inkqubo yeshawari yeArcora yeThermostatic ...
IiNkqubo zoMbane zeShower ze-5 zomSebenzi oshushu kunye neeVold Shower Valve
Iinkqubo zomculo zeShower zeShower zeChromed Shower Valve
Imisebenzi e-4 yobushushu be-RGB yeshawa yokuhlamba, i-600 × 800 mm ishawa yemvula esetiweyo, i-spa jet, imvula, i-304 intsimbi engenasici, isepha yokuhambisa amanzi, ishawa
Inkqubo yokuhlamba ye-RGB elawulwa ngu-4 ...
Inkqubo yokuhlamba, Ubushushu obuSebenzayo kwiShower, 360 × 500mm, Imvula, i-304 ye-Stainless, Ukuhlamba izandla, Ukuhlamba imvula
Inkqubo yokuhlamba, ishawa yobushushu kwimisebenzi emininzi ...
Ikhompiyutha emnyama yekhitshi enesiphatho esisodwa seHold 1 Hole Bracket Contemporary Yongeza kwiKhonkco lokuThengisa iSink
Ityhubhu emnyama yekhitshi ngesiphatho seqhosha elinye ...
Isiphatho esingabodwa 1 Hole Ikhitshi yetheyipu yaKhona isibiyeli sexesha eliNgezelelweyo kwi-Knob Sink Mixer Brushed Nickel / Commercial Black
1 Hole Isiphatho Esingatshatanga Sokupheka Ikhabethe Yesitya ...
Isandla esinye esiBhulashiweyo seNickel ekhitshini ompompo 1 Hole Lever Handle Bracket Contemporary Kitchen Faucet Commercial
Isandla esiBodwa seNickel Ikhitshi yeeMpompo ...
I-Chrome Kitchen Faucet 1 Hole Handle Single Handle Handle Contemporary Kitchen Sink Bracket Leekayer Commercial Black Kitchen Sink Faucet
Chrome ekhitshini ombhobho isibambo-lever eyodwa ...
I-ARCORA isitya sokuxuba esine-swivel spout
I-ARCORA i-lever eyodwa yokuxubha isitya sokuxubha i-swivel spout brush nickel
I-ARCORA i-lever eyodwa yokuxubha isitya sokuxubha i-swivel spout ...
I-ARCORA Igumbi lokuhlambela nge-swivel spout
I-ARCORA Matte iibhobho zokuhlambela ezimnyama
WOWOW Umjikelo wamatte omnyama itawuli yeringi
I-ARCORA Cofa isixhobo sokudibanisa umbhobho wabasetyhini
I-ARCORA Ikhabethe yeKhitshi ye-Faucet Sprayer Heads G1 / 2 Isinxibelelanisi
I-AR ekhitshini ye-Faucet Sprayer Sprayer Heads ...
I-ARCORA G1 / 2 Ikhompiyutha yokuhambisa isitshizi kwiNtloko yeNickel
ARC Ikhitshi Faucet sokutshiza iNtloko ...
I-ARCORA G1 / 2 yentloko yokupompa entloko
I-ARC yekhitshi ye-Faucet Spray Head ...
Ukutshintsha iNtloko ye-Spray ye-ARCORA yeKomityi yeBhasikithi yeNickel
Ukutshintshwa kwentloko yesitshizi ...
Intloko yesitshizi se-ARCORA sokutshiza itepu yekhitshi ye-G1 / 2 yesidibanisi esiyindoda
Intloko yesitshizi sokutshiza i-ARCORA ...
I-ARCORA Igumbi lokuhlambela faucet Ilize isinki Ipop-up drain plug
I-ARCORA Igumbi lokuhlambela faucet I-Vanity basin ...
Ndingazifumana phi ezona mpompo zishawari zisemgangathweni ophezulu?
Ukuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwefatyi yekhitshi oza kuyithenga yinto ozikhethele yona. Ukuba ujonga itephu enkulu yasekhitshini, ayikho enye indawo enokuba ngcono kuneempompo zasekhitshini zeArcora. Sinikezela ngezona mpompo zisemgangathweni ukusukela kwiimpompo ze-lever ukuya kwiipompo zasekhitshini ezahlukeneyo ze-thermostatic. Sithengisa iipompo zeshawari ezikumgangatho ophezulu ngexabiso elifikelelekayo ukuze ukwazi ukuphucula ukubonakala kwesinki yakho ngaphandle kokuchitha uhlahlo-lwabiwo mali.
Zithini iindleko zokutshintsha ipompo yesinki yekhitshi?
Iindleko zokutshintsha okanye ukufaka ipompo entsha kwisitya sakho sasekhitshini zixhomekeka kwizinto ezininzi, kubandakanya itephu entsha kunye neendleko zokufaka imibhobho yamanzi. IArcora ibonelela ngeefompu zeklasi yokuqala kwaye nako kuhlahlo-lwabiwo mali. Ngoku ungaluphucula ngokulula ikhitshi lakho ngomgangatho ophezulu weArcora kunye noqoqosho lwekhitshi.
Zeziphi iimpompo ezijikeleza iidigri ezingama-360 kwipropathi ye-thermostatic?
Uninzi lwe mixube yethermostatic yeArcora ine-360 degree swivel. Iimpompo zikwabonelelwa ngamaqhosha amathathu kwintloko yeshawari ukutshintsha imo yokutshiza okanye ukuvala amanzi okwexeshana.
Iyintoni iwaranti kwiifompu zasekhitshini zeArcora?
Zonke iipompo zasekhitshini zeArcora ziza newaranti yeminyaka emihlanu kunye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90. Ukuzithemba kwethu kufanele kukuqinisekise ngexabiso lomgangatho esikunika wona ngezi mpompo.
Yongeza: GuangZhouShi TianHeQu TianHeLu 490 Hao 1009 Shi
Inombolo: + 86 18688551727
Umgaqo-nkqubo wokuhambisa ngenqanawe
Ilungelo lokushicilela © 2020-2025 ARCORA INC. Onke amalungelo agciniwe.
Monakhawunti yam kwikhathalogu sijikeleza Ukukhangela imbali足 记
Xha ga mshelanax
Xha ga mshelana i-imeyile:
NGABA UFUNA I-10% CONPON?
Bhalisa kuluhlu lwethu ukuze ube ngowokuqala ukwazi malunga nengqokelela entsha kwaye ufumane izibonelelo ezizodwa
Fumana isaphulelo sam se-10%
Ndiyayamkela iimeko eziqhelekileyo
Hayi enkosi, ndikhetha ukuhlawula ixabiso elipheleleyo.
Asisoze sogaxekile, asizukurhoxisa nangaliphi na ixesha.